न्स (महिनावा, री) भएको बेला शा, री,रिक स’ म्पर्क गर्न हुन्छकि हुदैन ? सबैले जानीराखौ - Samachar Post Dainik
न्स (महिनावा, री) भएको बेला शा, री,रिक स’ म्पर्क गर्न हुन्छकि हुदैन ? सबैले जानीराखौ
धेरै महिला पुरुषहरुमा महिनावा,री अर्थात मिन्स भएको बेला शारी,रिक सम्पर्क गर्न मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बारेमा जिज्ञासा रहने गरेको छ ।
तर यसका बारेमा वैज्ञानिकहरुले भने फरक धारणा सार्वजनिक गरेका छन् ।
उनीहरुले गरेको अधययन अनुसार महिनावा,रीको बेलामा शारी,रिक सम्पर्क गर्न मिल्छ । तर, सुरक्षित सम्पर्कमा ध्यान पुर्याउनुपर्छ ।
क,न्ड,म लगाएर शा,री,रिक सम्पर्क गरेमा सं,क्र,मणबाट बच्न सकिन्छ ।उनीहरुले भनेका छन् । यो व्यक्तिगत इच्छामा पनि भर पर्ने कुरा हो ।
कसैलाई महिनावारी भएको बेला शारी,रिक सम्पर्क गर्ने मन हुन्छ भने कसैलाई हुँदैन । तर, हाम्रो समाजको चलनचल्तीको कुरा गर्ने हो भने महिनावा,रीको बेला सम्पर्क गर्नुलाई राम्रो मानिँदैन, परम्परागत भाषामा नछुने भएको सम्म भनिन्छ ।
तर महिनावा,री भएका बेला शारी,रिक सम्पर्क गर्न नहुने भन्ने कुनै बैज्ञानिक तथ्य भने छैन ।महिनावा,रीको बेला स,म्पर्क गर्दा महिलालाई फाइदा हुन्छ । यस्तो बेलामा शारी,रिक सम्पर्क गर्दा निस्कने हर्मोनले महिनावा,रीको दु,खाइ कम गर्छ ।
धेरै महिलाले अरू बेलाभन्दा महिनावा,री भएको बेला स,म्पर्क गर्दा बढी आनन्द लिने गर्छन् । यति हुँदाहुँदै पनि अ,सुर,क्षित स,म्पर्क गरेमा यौ, न रोग लाग्ने मात्र होइन, गर्भ,वती हुनसक्ने ख,तरा समेत रहन्छ ।
त्यसकारणले महिना,वा,रीको बेला ध्यान नदिँदा पछि दुःख पाइन्छ । ******** यो समाचार को पुरा भिडियो हेर्न तल क्लिक गर्नुहोला👇👇👇👇****
प्रकाशित मिति २१ बैशाख २०७८, मंगलवार ०४:००